Madasha Xisbiyada Qaran oo ka digey Sharci la horgeynayo Golaha Wasiirada – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Madasha Xisbiyada Qaran oo ka digey Sharci la horgeynayo Golaha Wasiirada
Qoraal kasoo baxay Madasha Xisbiyada Qaran ayaa waxaa looga horyimid Hindise-sharciyeedka Hay’adaha aan Dawliga ahayn, 2019 ee ay soo gudbisay Wasaarada Qorsheynta Xukuumadda Soomaaliya.
Hindise-sharciyeedkaan ayaa waxaa Maanta kulan la leh oo ka doodaya Xildhibaannada Golaha Wasiirada Xukuumadda Soomaaliya,hayeeshee Madasha Xisbiyada ay ka digeen.
Qoraalka Madasha ayaa waxaa lagu sheegay in Macnaha ugu weyn ee ku gadaaman xeerkan uu yahay in wasiir kasto Go’aan ka gaari karo meesha hay’adaha deeqaha bixiyaa u qeybinayaan kaalmooyinka dibadda ka yimaada.
Sidoo kale Xubnaha Madasha Xisbiyada ayaa waxaa ay sheegeen in Hindise-sharciyeedka Ha’adaha aan Dawliga ahayn uu qabad ku noqon doono heshiisyadii lala galay Somaliland oo dhigayay in aan la siyaasadeyn arimaha gargaarka banii’aadanimo iyo mashaariicda horumarinta.
Hoos Ka Akhriso Qoraalka Madasha Xisbiyada Qaran.